[APK] IAllo, usetyenziso olutsha lwemiyalezo kaGoogle, ngoku iyafumaneka | Iindaba zeGajethi
UManuel Ramirez | | ngokubanzi, software
UAllo sele elapha, ngomhla wokugqibela wehlobo ekugqibeleni UGoogle uqalise usetyenziso kwiVenkile yeGoogle Play emva kweeveki zokulinda kunye unayo i-duo Oze nenjongo yokuba yifowuni elula yokubiza ividiyo ngaphandle kokuthandwa kakhulu. I-Allo nayo iza nala maziko, kodwa iya kuba nenqaku leenkwenkwezi kwi-Mountain View kule minyaka imbalwa izayo: Umncedisi kaGoogle.
Inkqubo entsha yengxoxo isemthethweni kwaye iqala ukuhanjiswa kwiVenkile yeGoogle Play ukuze ikhutshelwe. Ukuba awuboni ukuba iyafumaneka, ungaya ngezantsi ukuze ukhuphele i-APK. UGoogle usungule ividiyo yokwazisa apho ibonisa ubuhle kunye nezibonelelo zeAllo kunye nephepha layo lewebhu apho ibeka khona izimvo kuzo zonke iimpawu zayo ezinomdla kakhulu.
Allo sisixhobo esisebenzayo qhagamshela ngqo kwinombolo yakho yefowuni Kwaye yenzelwe ii-smartphones kuphela, ubuncinci okwangoku. Bonke abafowunelwa abasebenzisa iAllo bazakuboniswa ngokuzenzekelayo, kwaye nabo bangamenywanga ukuba bakhuphele usetyenziso. Ngokuqinisekileyo apha kuya kufuneka uqale ukukhuthaza abafowunelwa kunye nabahlobo bakho ukuba bafunde malunga neAllo elungileyo ukuze unxibelelane nayo yonke imihla.
I-Allo inokusebenza okuhle kwaye yiyo i-axis esembindini yesiceloUmncedisi kaGoogle. Oku kuya kuba sisiseko esiphambili se-Android kunye neGoogle kwikamva, ke ngeAllo singakwazi ukubala ukuba le minyaka izakusizisa kuGoogle. Into eya kuyenziwa yi-wizard kukubonelela ngolwazi oluncedo kunye nokunxibelelana nolwazi lweemeko kunye neempendulo zendalo ngokungathi siyancokola nomntu. Ukuba ubuza malunga nemozulu ngomso, ungaphuma uqikelelo lwemozulu lwempelaveki yonke.
Sukulibazisa kwaye uzame enye yeapps yintoni ikamva.
Khuphela i-APK yeGoogle Allo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Khuphela iAllo ngoku, usetyenziso olutsha lwemiyalezo kuGoogle ngoncedo olubonakalayo kunye nokunye okuninzi
UApple ukhupha ingxelo yokugqibela yeMacOS Sierra